HRM ( 2-Days Training ), Jobs4U
HRM ( 2-Days Training )
အထူးသီးသန့် ရက်တိုသင်တန်း #HRM_Certificate in Human Resource Management (2-Days) Training @Jobs4U / March 1 ( Thursday/တပေါင်းလပြည့်နေ့) နှင့် Mar2( Friday/ တောင်သူလယ်သမားနေ့) ( နံနက် ၉-နာရီမှ ညနေ ၅-နာရီအထိ)။
>>HR Professional တစ်ယောက် လုပ်ချင်ပါသလား၊ ယခုမှစတင်ပြီး HR Field ထဲကိုဝင်ရောက်တော့မှာလား၊
HR တစ်ယောက်အဖြစ် တာဝန်ယူထားရပါပြီ ဒါပေမယ့် HR ပညာရပ်ကို Professional ကျကျ ထပ်လေ့လာချင်လို့ပါဆိုသူတွေအတွက် နှင့် #လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းတို့ကြားတွင် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးသည့် ပညာရပ်လည်းဖြစ်သည့်အတွက် စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသည့်မည်သူမဆို HR ပညာရပ်ကိုလေ့လာသင်ယူထားသင့်သည့်အပြင်Office Staff ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသူ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်လိုသူများ မသိမဖြစ်လေ့လာသင်ယူထားသင့်ပါသည်။
#HR တစ်ယောက်အတွက် Business Valueဆိုတာကို သိဖို့လိုအပ်ပါသလား ?
#Business Value ဆိုတာ HR တစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လို Effect တွေရှိပါသလဲ?
#HR တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းအသစ်များခေါ်ယူရာတွင်
လစာ ရာထူးနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များအား မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ပေးလိုပါသလား?
#HR တစ်ယောက်အနေဖြင့် မိမိ ဝန်ထမ်းများ၏ JD လို့ခေါ်တဲ့ Job Descriptionကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆွဲတတ်ချင်ပါသလား?
#ထိုသို့ JD ရေးဆွဲရာတွင် မည်သည့် အချက်တွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမလဲ?
#မိမိ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ Performance ကို မည်သို့တိုင်းတာမည်နည်း?
#မိမိဝန်ထမ်းတွေ Motivate ဖြစ်လာစေရန် ဘယ်လို Skill မျိူးတွေပါဝင်သော Training တွေ စီစဉ်ပေးရမလဲ?
#ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Safety တွေဟာ ဘာတွေလဲ?
#Safety ဆိုတဲ့ အချက်တွေက ဘယ်အရာကို ဆိုလိုတာလဲ?
#လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဝန်ထမ်း ပြဿနာများအား HRတစ်ယောက်အနေဖြင့် မည်သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲ?
စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါဝင်မယ့် Human Resource Management & Organization Development (HRM&D) သင်တန်းကို Jobs4U နှင့် KBS Management Academy တို့ပူးပါင်းကူညီဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
#တပေါင်းလပြည့်နေ့နှင့် တောင်သူလယ်သမားနေ့( Thursday & Friday) ( March 1 – March 2_ 2-Days)
#တပေါင်းလပြည့်နေ့နှင့် တောင်သူလယ်သမားနေ >> နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီအထိ။ (၂-ရက် သင်တန်း)။
50,000 MMK ( နေ့လည်စာအပါအဝင် + Tea/Coffee Break ၊ အအေးနှင့် မုန့်မျိုးစုံ သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်)။
>> လူဦးရေကန့်သတ်ထားသဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းအပ်နှံထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
***Phone: 09 450 541 444, 09 2549 17366, 09 767 00 2230 ***
#မှတ်ချက်။ ။ ၃ - ဦးနှင့်အထက် အပ်နှံပါက 10%Discount ထပ်မံ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
#Jobs4U & KBS ကျောင်းသားဟောင်းများ 20% Discount နှင့် ဆက်စပ်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအတွက် 10% Discount ရှိပါသည်။
Certificate in Human Resource Management & Organization Development
- Organizational Theories & Human Resource
- Organizational Design (OD) & FDI
- Job Analysis and Design
- Jobs Descriptions (JD) and Key Performance Indicator (KPI)
- Effective Performance Management System (EPMS)
- Staffing in Organizations & Talent Shortage Solutions
-Training and Development in Organizations
-Workplace Health and Safety
- Handling difficult employee
- Change Management Model
- Performance Evaluation & Rewards
- Effective Organization Meeting
>>သင်တန်းပြီးဆုံးပါက KBS Management Academy မှ အသိမှတ်ပြု Certificate လက်မှတ်ပေးအပ်ပါမည်။
>> သင်းကြားပေးမည့်ပုံစံ - Two Ways Opening Discussion, Brainstorming, Team Building, Teamwork & Games Program, Mind-Mapping & Case Study, Group Discussion များဖြင့် လက်တွေ့တွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခြေနေများအပေါ် အခြေခံကာ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမှန်တကယ် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန် သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
#ဆရာများ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံအခက်ခဲများကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပုံ၊ အောင်မြင်မှုအတွေ့အကြုံများကို စာတွေနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဆွေးနွေးပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
#သင်တန်းပြီးဆုံး အောင်မြင်ပါက အလုပ်ကိုင် ရရှိရန် Jobs4U (Jobs Hunting Agency & Organization Development Consultant) မှ ကြိုးစားကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
Phone: 09 450 541 444, 09 2549 17366, 09 767 00 2230
HR ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းတွင် အဓိကဏ္ဍမှပါဝင်ပြီး၊ Company လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပညာရပ်ဖြစ်သည့်အတွက် အဖွဲအစည်းရေရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲစေရန် အဓိက ထိန်းကြောင်းမောင်းနှင်ပေးမည့် ပညာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ #လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းတို့ကြားတွင် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးသည့် ပညာရပ်လည်းဖြစ်သည့်အတွက် စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသည့်မည်သူမဆို HR ပညာရပ်ကိုလေ့လာသင်ယူထားသင့်ပါသည်။
>>သင်တန်းချိန်များမှာ>>> ရုံးချိန်လွတ် စနေ၊တနင်္ဂနွေအတန်းများ၊ ညနေပိုင်းအတန်းများနှင့် တနင်္လလာ မှ ကြာသပတေးနေ့အထိ လစဉ်အလိုက်/ အပတ်စဉ်အလိုက် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပို့ချဆွေးနွေးပေးလျက်ရှိပြီး၊ အချိန်အခက်အခဲရှိသူများအတွက် သီသန့် တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း၊ အုပ်စုလိုက်သော်လည်း အထူးစီစဉ်ပေးပါသည်။
Jobs4U (Jobs Hunting Agency & Organization Development Consultant)
အမှတ်(၃)၊ ၃-လွှာ၊ လှည်းတန်း (၃) လမ်း၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းနှင့် ဈေးလမ်းကြား၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
Email: info.Jobs4Uall@gmail.com, hr.Jobs4Uall@gmail.com
Phone: 09 450 541 444, 09 2549 17366
Jobs4U သည် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်းနှင့် စီးပွားရေးအကြံပေးလုပ်ငန်းစု တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ သင့်စီးပွားရေး ထိုးဖောက်ကြီးထွားမှုအတွက် လိုအပ်သော Human Resource Management(HRM), Sales & Marketing Management (S&M), Office Management(OM), Project Management (PM), Business Management & Development တို့ကို အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၊ အထိရောက်ဆုံး သင်ကြားရေးစနစ်ဖန်တီးမှုတို့ဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။
Jobs4U Facebook page ကို Like & Follow လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားစာပေများနှင့် အောင်မြင်သောဘဝအတွက် အတုယူစရာ သင်ခန်းစာများကို နေ့စဉ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Jobs4U မှာ ကျွမ်းကျင်မှု့နယ်ပယ်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူရင်း…. ပိုမိုထိရောက်သော လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်များသို့သွားကြစို့….။
No.(3), 3rd fl., Hledan (3) Street, Between of U Tun Lin Chan Lane & Zay Lane, Hledan, Kamayut Township, 11041
01 March , Thursday 09:00
Yangon Zay, Christmas Editon
The Tea Factory, Yangon